Corporate Blogging: ကုမ္ပဏီများမှထိပ်တန်းမေးခွန်းဆယ်ခု | Martech Zone
ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ရေးခြင်း - ကုမ္ပဏီများမှမေးခွန်း ၁၀ ခု
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 18, 2007 တနင်္လာနေ့, မေလ 16, 2022 Douglas Karr
သင့်ကိုအမှန်တရားဆီပြန်လှည့်စေမည့်အရာတစ်ခုရှိပါကဘလော့ဂ်နှင့်လူမှုမီဒီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တွေ့ဆုံသည်။
အခွင့်အလမ်းများ၊ အကယ်၍ သင်ဖတ်လျှင်၊ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ လူမှုရေးအမှတ်အသားပြုခြင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်နားလည်သည်။ သင်သည်ချွင်းချက်ဖြစ်သည်။
'blogosphere' ပြင်ပတွင်၊ ကော်ပိုရိတ်အမေရိကသည် ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုရှာဖွေခြင်းနှင့် ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုတင်ခြင်းတို့ဖြင့် နပန်းလုံးနေရဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ တကယ်ပဲ! အများစုသည် စကားလုံးထွက်ရှိရန် Classifieds၊ Yellow Pages နှင့် Direct Mail တို့ကို ရှာဖွေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် ရေဒီယို ဒါမှမဟုတ် တီဗီမှာတောင် ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေက လွယ်တဲ့ ကြားခံတွေပဲ မဟုတ်လား ။ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု၊ နေရာတစ်ခု၊ ကြော်ငြာတစ်ခုတင်လိုက်ရုံနဲ့ လူတွေမြင်လာဖို့ စောင့်လိုက်ပါ။ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်မရှိပါ၊ စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများ၊ ထူးခြားသောလာရောက်လည်ပတ်သူများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ခွင့်ပြုချက်လင့်ခ်များ၊ pings၊ ခြေရာခံမှုများ၊ RSS ကို, PPC၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခွင့်အာဏာ၊ နေရာချထားခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးကို နားထောင်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကုမ္ပဏီကို ရှာကြည့်ရန် မျှော်လင့်ပြီး ဆုတောင်းပါ။
ဤဝဘ်အရာသည် မဟုတ် ပုံမှန်ကုမ္ပဏီအတွက် လွယ်ကူသည်။ ငါ့ကိုမယုံရင် အစပြုသူများအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ဝဘ်ညီလာခံ၊ ဒေသဆိုင်ရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးညီလာခံ သို့မဟုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းပွဲတစ်ခုတွင် ရပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်စိန်ခေါ်ချင်ရင် စကားပြောဖို့ အခွင့်အရေးယူပါ။ မျက်စိဖွင့်ပေးသူပါ။
ကုမ္ပဏီများမှဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်း ၁၀ ခု -
ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကြောင့် Blog လုပ်သင့်တာလဲ။
blogging နဲ့ web forum တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
လူတစ် ဦး ထက်ပိုသောဘလော့ဂ်ပြုလုပ်နိူင်ပါသလား။
လုပ်ငန်းခွင်၌ ၀ င်ရောက်ခြင်းခံရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဤမေးခွန်းများကို ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြားခဲ့ရသောအခါအလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။ လူတိုင်း blogging အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါ? စျေးကွက်သမားတိုင်းသည်ငါဆိုသည့်အတိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်အမြစ်တွယ်နေသည်မဟုတ်လော
Blogging ဆိုတာဘာလဲ? Blog ဟူသော ဝေါဟာရသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂျအွန်လိုင်းဂျာနယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခုသည် ခေါင်းစဉ်အလိုက် အမျိုးအစားခွဲပြီး မကြာခဏ ထုတ်ဝေသည့် ပို့စ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပို့စ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ၎င်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည့် သီးသန့်ဝဘ်လိပ်စာတစ်ခုရှိတတ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပို့စ်တစ်ခုစီတွင် စာဖတ်သူထံမှ အကြံပြုချက်တောင်းခံရန် မှတ်ချက်ပေးသည့် ယန္တရားတစ်ခုရှိသည်။ ဘလော့ဂ်များကို HTML (ဆိုက်) နှင့် ထုတ်ဝေသည်။ RSS ကို feeds ။
ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကြောင့် Blog လုပ်သင့်တာလဲ။ ဘလော့ဂ်များတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နည်းပညာများနှင့်အခြားဘလော့ဂါများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတို့တွင်ထူးခြားသောအခြေခံနည်းပညာများရှိသည်။ လူကြိုက်များသောဘလော့ဂါများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်၌အတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ရှုမြင်လေ့ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်များဟာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီခြင်း။
ဘလော့ဂ်နဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို မင်းရဲ့စတိုးဆိုင်အပြင်က ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး နာယကက တံခါးဝကို လျှောက်သွားတဲ့အခါ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတာကို သဘောကျတယ်။ 'ဘရိုရှာ' စတိုင်ဝဘ်ဆိုဒ်များသည် အရေးကြီးသည် – ၎င်းတို့သည် သင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကုမ္ပဏီသမိုင်းကြောင်းကို ပုံဖော်ထားပြီး သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်း တစ်စုံတစ်ဦးမှ ရှာဖွေနေသည့် အခြေခံအချက်အလက်အားလုံးကို ဖြေကြားပေးသည်။ ဘလော့ဂ်သည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ နောက်ကွယ်ရှိ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အမှန်တကယ် မိတ်ဆက်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်အား ပညာပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဝေဖန်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန်၊ စိတ်အားထက်သန်မှုကို တွန်းအားပေးရန်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ အမြင်ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းငယ်နည်းပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပွတ်သပ်မှုနည်းပါးပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှည့်ဖျားခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။
blogging နဲ့ web forum တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏ အကြီးမြတ်ဆုံးအချက်မှာ ဘလော့ဂါသည် လည်ပတ်သူမဟုတ်ဘဲ မက်ဆေ့ခ်ျကို တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်က ဒါကို တုံ့ပြန်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဝဘ်ဖိုရမ်တစ်ခုသည် မည်သူမဆို စကားစမြည်ပြောဆိုရန် ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို မတူကွဲပြားစွာ မြင်နေရတယ်။ ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရဖိုရမ်များသည်ဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အစားထိုးခြင်းမခံရပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါသည်။
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? ဘယ်လိုမျိုး အခမဲ့ အသံ? အပြင်မှာ ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ အပလီကေးရှင်းတွေ အများကြီးရှိတယ် - မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်မှာ သုံးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် နှစ်ခုလုံးရှိတယ်။ အကယ်၍ သင့်ပရိသတ်သည် ကြီးမားပါက၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော hosting ပက်ကေ့ဂျ်သို့ ဝယ်ယူရန် လိုအပ်မည့် bandwidth ပြဿနာအချို့ကို သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အလွန်ရှားပါးပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် သင့်ဘလော့ဂ်ရေးနည်းဗျူဟာများကို အမြင့်ဆုံးချဲ့ထွင်ပြီး သင့်ဘရိုရှာဆိုက် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် သင့်ဝဘ်လက်ခံသူ သို့မဟုတ် သင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ်လုပ်ပါမည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုက်ဖက်ညီအောင် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှထုတ်ဝေသင့်သနည်း။ ကြိမ်နှုန်းသည် ညီညွတ်မှုကဲ့သို့ အရေးမကြီးပါ။ တစ်ချို့လူတွေက ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ ငါဘယ်နှစ်ကြိမ်အလုပ်လုပ်သလဲလို့ မေးကြတယ်၊ ငါက သာမန်လို့မထင်ဘူး။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် တစ်နေ့လျှင် ပို့စ်2ခု ပြုလုပ်သည်... တစ်ခုမှာ ညနေပိုင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုသည် နေ့ခင်းဘက်တွင် အချိန်သတ်မှတ်ထားသော ပို့စ် (ကြိုရေးထားသော) ဖြစ်သည်။ ညနေတိုင်း မနက်တိုင်း ပုံမှန်အလုပ်အပြင်မှာ ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီအထိ ဘလော့ဂ်မှာ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်တိုင်း ပို့စ်တင်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေနဲ့ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်တင်တဲ့ တခြားဘလော့တွေကို တွေ့ဖူးတယ်။ ပုံမှန် ပို့စ်များဖြင့် မျှော်လင့်ချက်များ သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် ယင်းမျှော်လင့်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်၊ မဟုတ်ပါက စာဖတ်သူများကို ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသင့်သလားသို့မဟုတ်လက်ခံထားသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသင့်သလား။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်၏ နှစ်ရှည်လများစာဖတ်သူဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကို ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှု၊ အခြားအင်္ဂါရပ်များထည့်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကုဒ်မွမ်းမံခြင်းစသည်ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကို လက်ခံကျင်းပရခြင်းကို နှစ်သက်ကြောင်း သင်သိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုပို့စ်များသည် လက်ခံဖြေရှင်းပေးမှုများ အမှန်တကယ်ပင် ဘားတန်းကို ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ယခု သင်သည် လက်ခံဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းအမည်ရှိရန်၊ သင့်အပြင်အဆင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် hosting ပြုလုပ်နေပါက ကိရိယာများနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပေါင်းထည့်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ပထမဆုံး စတင်ခဲ့တာပါ။ ဘလော့ဂါ ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်သုံးပြီးတစ် ဦး hosted ဖြေရှင်းချက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် WordPress. ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ဒိုမိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဆိုက်ကို နောက်ထပ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုပါသည်။
အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ အမှားအယွင်း သို့မဟုတ် စော်ကားသည့်တိုင် မည်သူမဆို မှတ်ချက်မပေးပါက သင့်တွင် ရိုးသားသောဘလော့ဂ်တစ်ခု ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း အချို့သောလူများက ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရယ်စရာပါ။ မှတ်ချက်များအားလုံးကို သင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည် - သို့သော် တန်ဖိုးရှိသော အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာများကို သင်ဆုံးရှုံးနေပါသည်။ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် မှတ်ချက်ပေးသူများသည် အချက်အလက်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အကြံဉာဏ်များ ပေါင်းထည့်သည် – တန်ဖိုးနှင့် အကြောင်းအရာ နှစ်မျိုးလုံးကို ပေါင်းထည့်သည်။ မှတ်သားရန်- ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် အကြောင်းအရာကို နှစ်သက်ကြသည်။ သင့်အား ဘာမှမကုန်ကျဘဲ သင့်ပရိသတ်ကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ မှတ်ချက်များမပေးမည့်အစား၊ သင့်မှတ်ချက်များကို ရိုးရှင်းစွာအကဲဖြတ်ပြီး ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်မူဝါဒကို ထည့်သွင်းပါ။ သင့်မှတ်ချက်မူဝါဒသည် တိုတိုနှင့် ရိုးရှင်းနိုင်ပြီး၊ မင်းဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါ post မပေးဘူး! အပြုသဘောဆောင်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်မှတ်ချက်များသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုတိုးပွားစေပြီးသင်၏စာဖတ်သူများအားသင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ ငါကအရမ်းရယ်စရာကောင်းပေမယ့် spam အားလုံးကိုသဘောတူတယ်။ ငါမှတ်ချက်တခုကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါ - ငါပုံမှန်အားဖြင့်လူတစ် ဦး ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုပြောပြပါ။
လူတစ် ဦး ထက်ပိုသောဘလော့ဂ်ပြုလုပ်နိူင်ပါသလား။ လုံးဝ! သူတို့အားအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွင်းအမျိုးအစားများနှင့်ဘလော့ဂါများရှိခြင်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ဖိအားပေးတာလဲ။ ခင်ဗျားမှာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရှိတယ်။ သင်၏အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဘလော့ဂါများသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်သလဲ။ အပတ်တိုင်းပေါင်းသင်းသောထောင်ပေါင်းများစွာရှိသောကမ္ဘာပေါ်ရှိဘလော့ဂ်ပေါင်း ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ သည်အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်းသနည်း။ လူတွေကမင်းအကြောင်း Blogging လုပ်နေတယ်။ ဖန်တီးပါ Google ကသတိပေးချက် သင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင်ရှေးရှေးကသင့်အကြောင်းပြောနေတာကိုသင်သိလိမ့်မည်။ မေးခွန်းကသင်လိုချင်လားဆိုတာပါပဲ သူတို့ကို သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ် သငျသညျ သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်။ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီများစွာနှင့် အဆင်မပြေသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဆင့်ကို ပေးပါသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိချင်တယ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အားပေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သေမှာကို ကြောက်တယ်။ သင့်ကုမ္ပဏီသည် ရိုးရှင်းစွာ ကျော်လွှားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ အလားအလာတွေက မင်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပြီးသားပါ။ မင်းအမှားတွေလုပ်မိလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာလည်း မင်းအမှားတွေလုပ်မိလိမ့်မယ်။ သင့်ဖောက်သည်များနှင့် တည်ဆောက်နေသည့် ယုံကြည်မှုနှင့် အလားအလာတို့သည် သင်ပြုလုပ်သော ချွတ်ချော်မှုမှန်သမျှကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Tags: ဘလော့ဂ်မေးခွန်းများ Bloggingblogosphereအမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်Dummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ဘလော့ဂ်လုပ်ခဘယ်လောက်ကျလဲဘယ်လောက်မကြာခဏဘလော့ဂ်ရေးသင့်သလဲအနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်များငါတို့ဘလော့ဂ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသင့်ပါတယ်blogging ကဘာလဲဘလော့ဂ်နဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲငါတို့ဘာကြောင့် blog လုပ်သင့်သလဲ
Blog-Tipping: Netglobalbooks များ
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 19
ဘလော့ဂ်ရေးတာက ထင်ထားသလောက် မလွယ်ပါဘူး၊ မေးစရာတစ်ခုရှိတယ်၊ ကျွန်တော်က Venezuela ကပါ၊ ဒီမှာ ဘလော့ဂ်ရေးတာက yahoo ဒါမှမဟုတ် Google လို့ လူသိများတာမဟုတ်ပါဘူး… ဒါပေမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စျေးကွက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ပါပဲ၊ အခု ကျွန်တော် ရိုးရှင်းတဲ့ blog တစ်ခုနဲ့ စတင်နေပါတယ်။ http://bajaloads.com (lolz ကျွန်ုပ်သည် အကြံပြုချက်စာရင်းတွင်ပါရှိသည်)၊ ကျွန်ုပ်၏အမှတ်တံဆိပ်ကို BajaLoads ချဲ့ထွင်လိုပါသည်။
(Baja= စပိန်လို)… စပိန်လို သတင်းဘလော့ဂ်တွေ လုပ်တယ်၊ ညီမက ဘလော့ဂ်တစ်ခု လုပ်တယ်၊ ငါ့ကောင်မလေး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်… သူတို့အားလုံး စပိန်ဘာသာနဲ့… တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ငါက ၎င်းတို့ကို တက္ကသိုလ်၊ လိုင်းပေါ်၌ လူသိရှင်ကြား ဖြန့်ဝေခြင်း မပြုဘဲ နေရာတိုင်းတွင် spam များ မပြုလုပ်ဘဲ၊ မေးခွန်းမှာ ဤကဲ့သို့ မှတ်ချက်များ တင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော SEO အဆင့်ကို ရနိုင်မလား။ (ကျွန်ုပ်၏ url ဦးတည်ချက်အား ကျွန်ုပ်၏စာပို့အမည်တွင် ပြထားသောကြောင့်)
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 30
အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်။ လူထုကြားထဲမှာ နားလည်မှု ကင်းမဲ့မှုကို အမြဲတအံ့တသြဖြစ်မိတယ်။ အလယ်အလတ်မှာ ရေကူးတဲ့အခါ လူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဘလော့ဂ်ရေးဖို့နေနေသာသာအင်တာနက်အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိသောလူများအတွက်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 02
ငါ့မှတ်ချက်ကို မမြင်ရဘူး၊ ဘာလို့ ဒီကောင်ဖြစ်ရတာလဲ??
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 34
မှတ်ချက်တွေမှာ တစ်ခုခုမှားနေပုံရတယ်… အဲဒါကို ငါလုပ်နေတယ်… ဟမ်။
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 17
ဒါကြောင့် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဗင်နီဇွဲလားမှာ ကိုယ်ပိုင် “ကော်ပိုရေးရှင်း” ကို ဖန်တီးဖို့ ပြောနေတာပါ၊ ဘလော့ဂ်တွေက ဒီမှာ ကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့အတွက် 😛
ဥပမာ- ဒိုမိန်းခွဲများ ဖန်တီးရန် စဉ်းစားနေပါသည်။
ညီမလေး၊ ငါ့ရည်းစားနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ က ပြေးနေကြတာပဲ (ငါအမြတ် US$ နဲ့ Ven- bolivares နဲ့ ပေးမယ်ဆိုတော့ ငါက အဲဒါတွေ အများကြီးပေးစရာ မလိုဘူး)။
မေးခွန်းက ဒီလိုပါပဲ – ဒီလိုမျိုး အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ မှတ်ချက်တွေပေးရင် SEO positioning ပိုကောင်းလာမလား။ (ကျွန်ုပ်၏ url ကိုမျှဝေရသောကြောင့်)
တခြားဘလော့ဂါတွေကို ပေးခဲ့တဲ့ အကြံဉာဏ်တချို့ကို ယူထားပေမယ့်လည်း မင်းက အကြံဉာဏ်ပေးဖို့ လိုင်းပေါ်ရောက်နေတယ်၊
ငြိမ်းချမ်းပါစေ မောင် 😀